Uhlalutyo lwexabiso-i-Ripple Archives-Funda ukurhweba
tag: Uhlalutyo lwamaxabiso-Ripple
Ukuhamba phezulu kweXRP kubuthathaka njengoko kudibana nenkcaso kwi $ 0.23
Amanqanaba aphikisayo aphambili: $ 0.30, i-$ 0.40, i-$ 0.45
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 0.25, i-$ 0.20, i-$ 0.15
I-XRP / i-USD yexesha elide iTrend: Bullish
Kwiintsuku ezi-5 ezidlulileyo, i-XRP yenza kancinci kodwa ngokuthe ngcembe inyukela phezulu. Ngosuku lokuqala, ixabiso lenyuka ukusuka kwi- $ 0.20 ukuya kwi- $ 0.22 kodwa ingqekembe yabuyela kwi-0.21 yeedola. Namhlanje, ixabiso liye laxhuma ngaphezulu kwenqanaba lexabiso le- $ 0.23 kodwa labuyela ezantsi kwi-0.23 yeedola. I-XRP ngoku ijongene nokuchasana kufutshane nexabiso le- $ 0.23500. Olu xhathiso yinkxaso yangaphambili ngoSeptemba. Ikhefu elingaphezulu kwe- $ 0.23500, liya kubona ingqekembe yemali ingaphezulu kwenqanaba lexabiso le- $ 0.24.
Imakethi ye-XRP ingaphezulu kwe-20% yoluhlu lwesalathiso semihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba imarike ikwisantya esiphezulu. I-SMA yeentsuku ezingama-50 kunye nee-SMA zeentsuku ezingama-21 zalatha emazantsi zishiya isenzo sexabiso.
Uqikelelo lweXRP / USD lweXesha eliPhakathi: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, ingqekembe iye yafudukela kwindlela ethembekileyo. I-XRP okwangoku ibuyela umva emva kokuvavanya ukunganyangeki ngaphezulu kwe- $ 0.23
Isiphatho sesibane esikhuselayo siphula ngaphezulu kweentsuku ezingama-21 ze-SMA kunye ne-50-day SMA; oku kubonisa ukuba i-XRP iyenyuka. Ixesha le-RSI kwinqanaba le-14 kwinqanaba lama-59 libonisa ukuba ixabiso lingaphezulu komgangatho osembindini we-50. I-XRP iyenyuka kwaye isondela kwindawo yokuqhubela phambili.
Imbonakalo Jikelele yeRipple (XRP)
I-XRP iyakhula kwaye ikwimo yokuqhubela phambili. Ukunyuka okuphezulu kunokwenzeka ukuba kugcinwe ukuba ixabiso lihlala ngaphezulu kwe-EMAs. Ngamanye amagama, ukuba ixabiso lingaphezulu komgca wokumelana, ukunyuka okuphezulu kuya kugcinwa. Nangona kunjalo, ukuba amaxabiso ehla ngezantsi kwala manqanaba; uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka kwakhona.
Ripple (XRP) uphawu lwezoRhwebo
Myalelo: thenga iMida
Ixabiso lokungena: $ 0.22
Yeka: $ 0.15
Ithagethi: $ 0.30
tags Uhlalutyo lwamaxabiso-Ripple, XRP, XRPUSD